कथा: निर्दोष साथी – लाहाङ लिम्बू – sanghiya.com
Published February 22, 2013 · Updated February 22, 2013
‘‘नेपालीहरुको क्यालेण्डरमा अड्सट्ठी सालको हिन्दूहरुको दशैं र तिहार सुरुभयो । लाजेसा एक महिने विदामा पहाड फक्र्यो । लाजेसाले सुन्ने गरेको थियो– पहाडतिर गाउँ बस्तीबाट लिम्बुवानको आन्दोलनको शङ्खनाद भइरहेकोछ रे ! लाजेसाले यसपाली प्रत्यक्ष महसुस ग¥यो । गाउँका साना–साना भाइ–बहिनीदेखि लिएर बुढापाकासम्मले लिम्बुवानको इतिहासको बखान गर्थे । युवापुस्ताले भोलिको लिम्बुवानको सपना यसरी देख्थे–आधुनिक, विकसित, संमृद्वशाली, समावेशी– साझा लिम्बुवान । लाजेसालाई लाग्यो– ‘‘हामीले पढिरहेको शिक्षाले हामीलाई त धेरै टाढा–टाढा पु¥याई सकेको रहेछ– लिम्बुवानबाट । यो शिक्षा विशाल भीमकाय पर्खाल बनेर ठडिएको रै’छ । लाजेसा एकातिर अनि लिम्बुवान र लिम्बुवानका कुराहरु पर्खालको उतातिर । लिम्बुवान त अनौंठो अनि झन् अनौठो लाग्ने भैसकेको रहेछ ।’’
लाजेसा अलि ढिलो उठ्यो क्यारे, आज निकै हतारिएर हिँडिरहेको थियो । साढे छ बजेको पहिलो कक्षा भ्याउनु थियो, उसले । उसले कलेजमा अंग्रेजी विषय पढाउन थालेको दुई वर्ष जति भएको थियो । बिहान उठेर ओछ्यान छाडेपछि बेलुका चार बजेपख कोठामा आइपुग्ने दैनिकी थियो– उसको । लाजेसा कलेज पुग्न तीन–चारवटा चोकहरु छिचोलेर हिँड्नुपथ्र्यो । ऊ त्यो दिन, दायाँबाँया नहेरी निहुरिएर हिँडिरहको थियो । जब प्रगति चोकमा पुग्यो, एउटा आवाजले लाजेसालाई आकर्षित ग¥यो– ‘‘बाबु, गाडीले किच्छ के !’’
लाजेसा अडिएर आवाजतिर फर्केर हे¥यो । सानी बच्ची त्यस्तै पाँच बर्षकीले भर्खर हिँड्न थालेको भाइ त्यस्तै दुई बर्षकोलाई एक हातले सम्हाल्दै र अर्को हातमा दूधको पोको बोकेर बाटो काट्दै थिई । लाजेसाले ती सानी केटीलाई हेरिरह्यो । उनीहरु पसलबाट दूधको पोका किनेर फर्किरहेका थिए । जब उनीहरुले बाटो काटे, सानी केटीले पछि फर्केर लाजेसालाई हेरिन् । लाजेसाले उनीतिर फर्केर एकोहोरो हेरिरहेको देखेपछि उनी लजाइन् र हाँसिन् । लाजेसा पनि मुस्कुरायो र उसलाई लाग्यो– उनी कति धेरै ज्ञानी । घिउ रङ्को जामा, चप्पल लगाएकी अनि कपाल लामो तर छोडेकी । शायद उठ्ने बितिक्कै पसल आउँदा आउँदै भाइले पछ्याएको होला । पाँच वर्षकी केटीको यति ज्ञानी व्यवहार देखेपछि लाजेसा उनीसँग धेरै प्रभावित भयो । त्यसपछि, सरासर कलेजतिर लाग्यो ।
अर्को दिन, सधँैझै लाजेसा हिँडिरहेको थियो । जब ऊ प्रगति चोकबाट मोडिन लागेको थियो, तब उसलाई त्यही सानी केटीको याद आयो । अलिकति पछि फर्केर यसो आँखा डुलाएको के थियो– एउटा सानो–सानो होटल अगाडि त्यही सानी केटी त्यही ड्रेसअप्मा थचक्क टुलमा बसेर दाँत माझिरहेकी थिई । तिनी लजाउँदै उठिन् र होटलभित्र छिरिन् । तिनी खुब लजाइन् । ती सानी केटीको हेर्ने गरिका, लजाउने बानी सबैसबै ठूली, परिपक्व केटीको जस्तो लाग्न थालेको थियो– लाजेसालाई । त्यो दिन ती केटीको याद निकैबेर आइरह्यो– उसलाई ।
राजधानीमा लगभग जाडो शुरु हँुदै थियो । व्याटमिन्टन खेल्ने चलन शुरु भइसकेको थियो । प्रायको हातमा बिहान सुरु भएपछि व्याटमिन्टन हुन्थ्यो । जहाँ मैदान त्यही व्याटमिन्टन, सडकतिर व्याटमिन्टन, आँगनमा व्याडमिन्टन, जताततै व्याटमिन्टनले ठाउँ लिएको थियो । बिहानको जाडोमा शरीरलाई तातो बनाउने राम्रो माध्यमको रुपमा मानिसहरुले व्याटमिन्टन खेल्ने गर्थे । सडकमा हिँड्दा कतिपय ठाउँमा त बाटो हिँड्नै गाह्रो हुने । ती खेल्नेहरुले पनि बिहानीको खुल्ला सडकको उपभोग मन्जाले गर्न पाउने । लगभग आठ बजेपछि त जम्मै सडक गाडीहरुको हुने । एकदिन प्रगति चोकमा पहिलोपल्ट तिनी सानी केटीले पनि व्याटमिन्टन खेलिरहेकी थिई– लाजेसाले देख्यो । उही सानो भाइसँग खेलिरहेकी थिई– उनी । शायद, सबैले खेलेको देखेपछि उनलाई पनि खेल्न मन लागेको होला । शायद, बा–आमालाई निकै कर गरेर व्याटमिन्टन किनी मागी होलिन् । स्कुलमा, शायद व्याटमिन्टन खेल्ने गर्थी होलिन् । तिनीलाई पनि खेल्नुपर्ने भन्ने प्रभाव प¥यो होला । उनको भाइलाई व्याट उठाउनै गारो परिरहेको थियो । सानी केटीले भने फकाउँदै, हौस्याउँदै आफ्नो भाइलाई व्याटमिन्टन खेल्ने पार्टनर जबरजस्ती बनाइरहेकी थिइन् । ती दुईको खेल देखेपछि लाजेसा एकछिन् उभिएर हेर्न थाल्यो । सुरुमा, चाहिँ ती केटीले देखेकी थिइनन् र खेल्नमै धुन दिइन् । जब तिनीले लाजेसाले आफूतिर हेरिरहेको थाहा पाइन्, तब तिनी दौडिएर होटलभित्र पसिन् । तर, भाइ सडकमै भएकोले तिन्ले पर्दा उठाएर चियाएर लाजेसालाई हेर्न थालिन् । लाजेसालाई तिन्को लजाई, मीठो लाग्यो । उनको चिहाई आनन्दको लाग्यो । पर्दा उघारेर आफूतिर हेर्दाको उनको हाँसो मिसिएको अनुहार लाजेसालाई राम्री लाग्यो । लाजेसा आफू पनि लजाएको अनुभूति गर्दै मन्द हाँस्दै आफ्नो बाटो लाग्यो ।
यसपालीको जाडो सुरु भएपछि ती सानी केटी बारम्बार सडकमा व्याटमिन्टन खेल्न निक्लने गरेकीले लाजेसाले प्रत्येक दिनजसो देख्न थालेको थियो । अब त बानी भएछिन् क्यारे– तिनी लाजेसासँग लाजले भाग्न छोडेकी थिइन् । तिनी कहिले उही सानो भाइसँग खेलिरहेकी हुन्थी । कहिले बाह्र–तेह्र वर्षकी केटीसँग, कहिले लाजेसाकै उमेरको मान्छेसँग– शायद, उनैको बुबा हुनसक्छ, । कहिले पच्चीस–छब्बीस वर्षकी आइमाईसँग– शायद, उनैको आमा हुनसक्छे । लाजेसाको भेट जब उनीसँग हुन्थ्यो, दबैजना हाँसेर अभिवादन गर्न थालेका थिए । ती सानी केटी लाजेसालाई देख्ने बितिक्कै लाजले भाग्न छाडेकी थिइन् । यसरी भेटमा हेराहेर गर्ने अनि मुस्कुराएर छुट्टिने गर्न थालेको निकै दिन भइसकेको थियो । एकखालको माया व्यक्त गर्न थालेका थिए– दुबैका आँखाहरुले । उनीहरुको हेराइको चालीबाट पे्रमको बह सरर बगेको प्रतीत् हुन्थ्यो । लाजेसाको मनमा प्रेमको भाव उर्लिसकेको थियो । एकदिन लाजेसाले व्याटमिन्टन खेल्ने अनुमति माग्यो । त्यो दिन तिनी दश–बाह्र वर्षकी पार्टनरसँग खेलिरहेकी थिइन् । ती सानी केटीलाई पनि लाजेसासँग खेल्ने जोड ईच्छा उहिलेदेखि भएझैं पार्टनरसँग भएको व्याट मागेर लाजेसालाई दिइन् । अनि आफू खेल्न तयार भइन् । तिनी छ्ुट्टै रौनकतामा खेल्न थालिन् । लाजेसालाई खेल्ने बानी थिएन । उसले कक्लाई निकै माथि फाल्थ्यो । तिनी भन्थिन् ‘‘ठीक्क फाल्नु न । तपाईं र म नमरी खेलौं ल ।’’ लाजेसा भन्थ्यो– ‘ल’ ।
तर, लाजेसाले ड्युटी भ्याउनु थियो । लाजेसाले खेलबाट अलग्गिनु नै पर्थ्यो । तर तिन्ले खुब खेल्न कर गरिरहेकी थिइन् । भोलि खेल्ने भन्दै ऊ त्यो दिन हिँड्यो । तिन्ले निकै परसम्म हेरिरहिन् । तिनी आमा अथवा बुबासँग खेलिरहेकी थिइन् भने लाज मान्थिन् । आँखाको सहाराले बोल्थे, आपसमा । हाँसोको सहाराले माया व्यक्त गर्थे । कतिपय दिनका भेटहरुमा लाजेसाले सोध्थ्यो– ‘के गरेको ?’ उनी भन्थिन्– ‘खेलेको । खेल्न आउनु न ।’
कतिपय दिनहरुमा, उनी ब्रश गर्दै गरेकी हुन्थिन् । ब्रश गरी सकेर बाटोतिर फर्केर होटलकै छेउमा उभिरहेकी हुन्थिन् । लाजेसाले सोध्ने गथ्र्यो– ‘आज किन नखेलेको ?’ उनी भन्थिन्– ‘कक् नै टुट्यो ।’ लाजेसा त्यतिबेला महसुस गथ्र्यो, मेरो लागि, मलाई भेट्न बाटोतिर फर्केर ब्रश गरिरहेकी रै‘छे । मलाई कुरिरहेकी रै‘छे आदि–इत्यादि । दोस्रोपल्ट, पुनः महसुस गथ्र्यो– व्याट मिन्टनको एकसेट किनेर उनलाई उपहार दिऊँ कि ! तर, तेस्रो पटक साच्थ्यो– फेरि उनको आमा र बुबाले के भन्लान् ! चलन–चल्तीको भाषामा भनिने लेक्चरर लाजेसा र तिनी पाँच–छ वर्षकी केटी बीचको मित्रता यति नै व्यालेन्समा हुर्किंदै थियो । लाजेसाको उनन्तीस वर्षे टिठ् लाग्दो मन कता कता दोमन भएजस्तो । मनको दुनियाँमा लाजेसाको कोही त भएजस्तो । त्यही ढङ्गले, अपत्यारिलो लाग्ने तिनको मित्रता लाजेसासँग हुर्कंदै थियो ।
नेपालीहरुको क्यालेण्डरमा अड्सट्ठी सालको हिन्दूहरुको दशैं र तिहार सुरुभयो । लाजेसा एक महिने विदामा पहाड फक्र्यो । लाजेसाले सुन्ने गरेको थियो– पहाडतिर गाउँ बस्तीबाट लिम्बुवानको आन्दोलनको शङ्खनाद भइरहेकोछ रे ! लाजेसाले यसपाली प्रत्यक्ष महसुस ग¥यो । गाउँका साना–साना भाइ–बहिनीदेखि लिएर बुढापाकासम्मले लिम्बुवानको इतिहासको बखान गर्थे । युवापुस्ताले भोलिको लिम्बुवानको सपना यसरी देख्थे–आधुनिक, विकसित, संमृद्वशाली, समावेशी– साझा लिम्बुवान । लाजेसालाई लाग्यो– ‘‘हामीले पढिरहेको शिक्षाले हामीलाई त धेरै टाढा–टाढा पु¥याई सकेको रहेछ– लिम्बुवानबाट । यो शिक्षा विशाल भीमकाय पर्खाल बनेर ठडिएको रै’छ । लाजेसा एकातिर अनि लिम्बुवान र लिम्बुवानका कुराहरु पर्खालको उतातिर । लिम्बुवान त अनौंठो अनि झन् अनौठो लाग्ने भैसकेको रहेछ ।’’
एक साँझपख, गाउँ घुम्ने क्रम्मा लाजेसा आफ्नो फुपू काइँलीको घरमा पुग्यो । लाजेसाको नाताले भाइ पर्ने डम्बरको छोरी आकाङ्क्षा पाँच वर्षकी भइछे । राम्री, उचालौं लाग्ने, बोर्डिङ स्कुलको युनिफर्ममा असाध्यै सुहाएकी थिई । त्यतिबेला लाजेसाले साथीले जस्तो ईशारा गर्ने उही सानी केटीको याद ग¥यो । उसको मष्तिस्कमा थुप्रै प्रश्नहरु आए– उनी कहाँ होलिन् ? मैले जस्तै आफ्नो पहाड गई होलिन् ! व्याटमिन्टन खेल्दै होलिन् ! मलाई याद गर्दै होलिन् आदि इत्यादि ।
लाजेसाको एक महिने कलेज बिदा सिद्वियो । पहिले जसरी नै, आफ्नो ड्युटी सुरुभयो, काठमाडौंमा । विगतकै जसरी कलेज सुरुभयो । उसले बाटोमा हिँड्दा प्रगति चोकमा सानी केटीलाई हप्तादिन जस्तो देखेन । उनलाई देख्न लाजेसाको आँखाहरु हरपल लालयित भए । उनलाई भेट्न लाजेसाको मन हत्तारिएको थियो । एकपख, लाजेसालाई भौतारिन मन लागेर कोठाबाट बाहिर निक्लदै थियो । सानी केटी र उनकी आमा छेवैको पसलमा उभिरहेका थिए । दुबैजनाका आँखा जुधे । दुबै हाँसे । हराएर भेटिएका झैं दुबै झस्के । उनले आफ्नी आमालाई हेरी । आमा पसलेसँग कुरा गर्दै थिइन् । यो मौकामा उनी दौडिँदै लाजेसातिर आइन् । उनको हातमा व्याट थियो । अर्को हातले लाजेसाको हात समाउन भ्याइन् । लाजेसाले पहिलो प्र्र्रश्न ग¥यो– ‘कहिले आयौ, गाँउबाट ?’
‘आज बिहान’– जवाफमा उनले भनी ।
लाजेसाले दोस्रो पटक सोध्यो ‘किन यो पसलमा आएको ?’ ‘ममी र म व्याटमिन्टन खेल्दै थियौं । यो पसलको घरमा अल्झियो र माग्न आएको ।’ लाजेसालाई उहिलेदेखि सोध्न मन लागेको तर सोध्न नभ्याएको उनको नाम सोध्यो ।
जवाफमा भनिन् ‘आयश्रित’
तुरुन्तै उनले पनि सोधिन् लाजेसाले प्रिन्स्टन स्कूलमा पढाउने बारेमा । त्यति नै बेला आयश्रितको ममीले बोलाइन् ।’ आयश्रित, कहाँ हिडेकी ?’
हिँडिरहेका उनीहरु रोकिए । लाजेसालाई आयश्रितको आमासँग सरम लाग्यो । त्यति नै बेला अलि ठुलो आवाजमा दोस्रो पटक कराइन्– ‘‘यता आइज ।’’ आयश्रित दौडिएर आमा कहाँ गइन् । लाजेसा पनि आफ्नो बाटोतिर लाग्यो । लाजेसा आफूले प्रिन्सटनमा पढाइरहेको आयश्रितको प्रश्नले अचम्मित भयो । यति सानी बच्चीले आफूले पढाउने गरेको हेक्का कसरी राख्न सक्यो होला भनेर आफूले आफूलाई खुब सतायो । आयश्रितको यो परिपक्व प्रश्न र ख्याल गराइले ऊ अझ धेरै प्रभावित भयो । लाजेसालाई आयश्रितको सम्झना चौगुणा बढेर गयो । लाजेसासँगको कुरा गर्ने धोको पूरा नभएकोले होला । एक महिना भन्दा धेरै समय देखादेख हुन नपाएर होला ! लाजेसा ड्युटीबाट फर्कंदै गर्दा आयश्रित होटलको बाहिर बसिरहेकी थिइन्– लाजेसालाई कुरेर । आयश्रित दौडिएर गइन्, लाजेसालाई देख्ने बितिक्कै । उही पाराले, उनले लाजेसाको हात समाइन् र कुरा सुरु गरिन्– ‘‘हिजो घरमा अड्केको कक् पसले दिदीले दिनुभो त । ’’
‘‘होर ! त्यसपछि ममीसंग खेल्यौ होला । ’’
‘‘अहँ, ममीले त पढ्नुपर्छ भन्नु भो । ’’
आयश्रितले विना धकाई लाजेसालाई पछ्याई । कुराकानी गर्दै दुबैजना अघि हिँडिरहे । उनको तीन चारवटा प्रश्नले लाजेसालाई धेरै अचम्म र मक्ख बनायो । उनले घर सोधिन् । विवाह भए नभएको सोधिन् । लाजेसाको बा–आमाको हालखबर सोधिन् । उहाँहरुलाई नमस्कार सुनाई दिनु पनि भनिन् । त्यसो त, लाजेसाले पनि उनलाई धेरै प्रश्नहरु ग¥यो । यसरी यिनीहरुले हात समाई कुरा गर्दै हिँडेको पत्तै भएन । लाजेसाको कोठा छेउमा आइपुगी सकेका थिए । लाजेसाले आयश्रितसँग प्रस्ताव राख्यो –‘‘मेरो कोठामा जाने ?’’
आयश्रितले यसो भनिन्– ‘‘तपाई चिया पकाउनु हुन्न होला ।’’
दबैजना कोठाभित्र छिरे । लाजेसाले ढोकाको चुकुल लगायो र आयश्रितलाई ओछ्यानमा बस्न भन्यो । आयश्रितले कोठालाई घुमिफिरी हेरेर व्यक्त गरिन्–‘‘ आहा ! कति राम्रो कोठा । कति धेरै बुकहरु ।’’ लाजेसाले हाँसेर टा¥यो, आयश्रितको बखानलाई । लाजेसाले दूध–चिया राम्रै बनायो र कुकिज बिस्कुट पनि प्लेटमा खन्यायो । खान आग्रह ग¥यो । चिया लिनु पहिले आयश्रितले भनिन्– ‘‘मैले त तपाईंलाई जिस्क्याएको पो त ।’’ दुबैले चिया र बिस्कुट खान थाले । खानलाई आयश्रित लजाउँदै थिई । अन्ततः खान थालिन् । बीचैमा लाजेसाले भन्यो– ‘‘आयश्रित म तिमीलाई धेरै सम्झिरहन्छु । धेरै माया गर्छु ।’’ माया भन्ने शब्दसँग उनी खुब लजाइन् ।
‘‘तिमी त मेरो साथी हो– सानी साथी ।’’ आयश्रितले जवाफमा भनिन् – ‘‘म जस्ती सानीको तपाईंजस्तो ठूलो मान्छेसँग पनि साथी हुन्छ र !’’ लाजेसाले हाँस्दै भन्यो– ‘‘हुन्छनी, तिमी मेरो सानी साथी, म तिम्रो ठुलो साथी । ’’ उसले फेरि जोड्यो– ‘‘साथी नभएको भए, अनि मलाई माया नगर्ने भए, तिमी यहाँ किन आयौ त !’’ आयश्रितले सुनिरहिन्– ‘‘तिमी मेरी छोरी जस्तै पनि छौ । तर तिमीलाई आयश्रित छोरी भनेर बोलाएँ भने, तिम्रो बाबा र आमा मसँग रिसाउनु हुन्छ ।’’
अब, लाजेसालाई आत्माबाट सानी आयश्रितसँग कुरा खोल्न मन लाग्यो । उसलाई मनको बह पोख्ने साथी पाए जस्तो लाग्यो । जति आफ्नो कुरा सुनाउँदै गयो, उतिनै आयश्रितले पनि सुनी रहिन्– ‘‘तिमीजस्तै मेरी छोरी मुन्धुम छे ।’’ मुन्धुमको नाम तीन चार चोटी उच्चारण गर्न कोसिस गरी– आयश्रितले ।
‘‘मुन्धुमको ममी र मेरो दुई वर्ष अघि डिभोर्स भएको हो । डिभोर्स भनेको थाहा छ ?’’
‘‘मुन्धुमको ममीसंग छुटिएर बस्नु भनेको ।’’ जवाफमा आयश्रितले भनी ।
लाजेसा आफ्नो कथामा अघि बढ्न चाह्यो– ‘‘जब मुन्धुमको ममी मसँग नबस्ने भनेर गई अनि तिमी जस्तै मेरी छोरी मुन्धुमलाई उतै लग्यो । मसँग बस्न मान्छेहरुले दिएनन् ।’’ यसरी नै लाजेसाले आयश्रितसँग कुराकानी गर्ने क्रम्मा छोरीलाई डाक्टर बनाउन चाहेको सुनायो । अनि उसले आयश्रितसँग भन्यो– ‘‘तिमी पछि ठूली भएर डाक्टर बन्नु ल ।’’
‘‘ल’’– आयश्रितले भनी । यतिबेला लाजेसाले आयश्रितको कपाल कोरीबाटी गरिदिदैँ थियो । अनि भन्दै पनि थियो–‘‘ठूलो मान्छे हुनु । सबैसँग राम्रो हुनू । झगडा नगर्नू । नराम्रो कहिल्यै नबोल्नु, ल ।’’
जवाफमा उनी भन्थी– ‘‘ल’’ ।
यही तवरले कुराकानी गर्दै थिए । लाजेसाले आयश्रितको कपाल कोरीबाटी गर्दै र सुम्सुम्याउँदै पनि थियो । उनी हेर्दा हेर्दै लाजेसाको काखमा निदाइन् । अनि उसले आयश्रितलाई आफ्नो ओछ्यानमा सुतायो । उसले आयश्रितको अनुहारलाई खुब राम्ररी नियाल्यो– कपाल, निधार, आँखा, नाक, ओठ, घाँटी……. । अनि निधारमा एकपटक म्वाँई खायो । उसले आफ्नो छोरी मुन्धुमको यादले सताइरहने त्यो तिर्सना मेट्यो । मुन्धुम आफ्नो ओछ्यानमा सुतिरहेको कल्पनामा हरायो– लाजेसा । अनि उसले भोलि कलेजमा पढाउने विषयको लेसन प्लान बनाउन मात्र लागेको के थियो, जोडले बाहिरबाट कसैले ढोका ढक्ढकायो । लाजेसाले चुकुल खोल्यो । आयश्रितकी आमा रुँदै, अतालिदैं भित्र पसिन् । साथमा प्रहरी पनि थिए । एक भ्यान प्रहरीहरु लिएर आयश्रितकी आमा आएकी रै’छिन् । सुतिरहेकी आयश्रितलाई समाल्दै जोड–जोडले चिच्याईन्– ‘‘प्रहरी साब्, खराब नियतले मेरी छोरीलाई यसले ल्यायो । मेरी छोरी बर्बाद भई । म बर्बाद भएँ ।’’ एकहोरो ढङ्गले रुँदै कराउँदै गर्न थाली । आयश्रित जुरुक्कै उठेर यता न उति भई । अनिँदोले आयश्रित बरालिन् । अत्तालिन् । प्रहरीलाई देखेपछि र आमाको रुवाई र चिच्याईले गर्दा आयश्रित अक्क न बक्क भईन् । लाजेसा केही बोेल्न खोज्दै थियो । प्रहरीले उसलाई केही बोल्नै दिएन । आमाले आयश्रितलाई छातीमा टाँसेर बाहिर लगिन् । आयश्रित भने एकहोरो एक टकले हेरिरहेकी थिइन्– प्रहरीहरुले लाजेसाको कुरै नसुनी उसलाई थप्पर, मुक्का, लात बजार्न थाले; लछार–पछार गर्न थालेका थिए । तुरुन्तै हतकडी लगाएर लाजेसालाई भ्यानमा कोचे ।
त्यतिन्जेल सम्ममा बाहिर मान्छेहरु धेरै भेला भइसकेका थिए । कोही हेरिरहेका थिए । कोही कानेखुशी गर्दै थिए । एकैछिनमा भ्यान गुड्यो ।
Next story अब पहिचान र अस्तित्ववादी गीत लिएर आउनेछु
– भिम मगर, कलाकार
Previous story कृषि व्यवसाय जोखिममा पर्नुको कारण र विकल्प